पाथिभरा म्याराथनको उपाधि सोलुखुम्बुका सुमन कुलुङले जिते ! – Sagarmatha Online News Portal
पाथिभरा म्याराथनको उपाधि सोलुखुम्बुका सुमन कुलुङले जिते !
काठमाडौं । पाथिभरा म्याराथनको उपाधि सोलुखुम्बुका सुमन कुलुङले जितेका छन् । मंगलबार भएको ५४ किलोमिटर दूरीको प्रतियोगितामा कुलुङले ४ घण्टा १३ मिनेट २७ सेकेण्डमा निर्धारित दूरी पार गरी उपाधि जितेका हुन् ।
पाँचथरका प्रताप थाम्सुहाङ दोस्रो भएका छन् । उनले निर्धारित ५४ कि.मी. दूरी ४ घण्टा १४ मिनेट ९ सेकेण्डमा पुरा गरे । यस्तै रुकुमका दिर्घराज बुढा तेस्रो भए । दौड प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ १ सय धावक सहभागि भएका थिए । दौड प्रतियोगितामा विजेताले क्रमशः प्रथम, द्वीतीय र तृतीयाले नगद १ लाख ५१ हजार १ सय ११, १ लाख ११ हजार १ सय ११ र ५१ हजार १ सय ११ रुपैँया प्राप्त गरे ।
महिला दौडको उपाधि जुम्लाकी सुनमाया बुढाले चुमेकी छिन् । उनले निर्धारित ४५ कि.मी.दूरी ३ घण्टा ३८ मिनेट ५५ सेकेण्डमा पार गरिन् । त्रिभुवन आर्मीका सरिता बासी दोस्रो र धादिङकी रमिला तामाङ तेस्रो भएका छन् । महिला म्याराथनमा २४ जनाको सहभागिता रहेको थियो । विजेताले नगद ८१ हजार १ सय ११ रुपैंया, द्धितिय हुनेले नगद ५१ हजार १ सय ११ रुपैंया र तृतिय हुनेले ३१ हजार १ सय ११ रुपैयाँ पाएका छन् ।